Wararka - Hawlgalka tallaalka Microbial
Hawlgalka tallaalka microbial
1. Tallaalka Slant (oo leh Staphylococcus aureus)
(1) Qaliinka ka hor, gacmahaaga ku tirtir 75% aalkolo, oo shidi nalka alkoholka ka dib marka uu aalkoloku uumibaxo.
(2) Ku qabo tubbada cidhiidhiga ah iyo diyaaradda u janjeedha inta u dhaxaysa suulka gacanta bidix iyo afarta farood ee kale, si diyaaradda u janjeerta iyo dhinaca cidhiidhiga ahi ay u yihiin kor iyo meel toosan.
(3) U rog rogrogmada iyo tampon-ka diyaaradda u janjeedha marka hore, si ay si fudud uga soo baxdo xilliga tallaalka.
(4) Ku qabo giraanta tallaalka gacanta bidix (sida adigoo qalinka haysta), oo ku nadiifi dhamaadka giraanta dab, ka dibna ku nadiifi inta soo hadhay ee tuubada tijaabada ee laga yaabo inay u fiddo tuubada tijaabada.
(5) Isticmaal farta giraanta, farta yar iyo calaacalaha gacanta midig si aad uga soo saarto tuubada culayska leh iyo suufka ama furka tuubada tijaabada ee tuubada tijaabada in la isku xidho isku mar, ka dibna u daa tubbada afka si tartiib ah u kulayl si aad u nadiifiso (ha u gubin si aad u kulul).
(6) Ku dheeree wareegga tallaalka gubtay ee tuubada dhaqanka bakteeriyada, taabo wareegga tallaalka ee gidaarka gudaha ee tuubada tijaabada ama dhexdhexaadka iyada oo aan lahayn bakteeriyadu, ha qaboojiso, ka dibna si tartiib ah u xoq ajada bakteeriyada, ka dibna ka saar. bakteeriyada bakteeriyada.Ka soo saar wareegga tallaalka tuubada abuurka.
(7) Si deg deg ah u fidi wareegga talaalka ee dhibka leh ee dhuuban tuubo kale oo tijaabo ah oo lagu xirayo.Laga soo bilaabo xagga hoose ee garoorka kor, samee xariiq cufan oo ah qaabka "Z" gadaal iyo gadaal.Mararka qaarkood cirbadda tallaalka ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu sawiro xariiq bartamaha dhexe ee tallaalka qotodheer, si loo eego sifooyinka koritaanka ee cadaadiska..
(7) Si deg deg ah u fidi wareegga talaalka ee dhibka leh ee dhuuban tuubo kale oo tijaabo ah oo lagu xirayo.Laga soo bilaabo xagga hoose ee garoorka kor, samee xariiq cufan oo ah qaabka "Z" gadaal iyo gadaal.Mararka qaarkood cirbadda tallaalka ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu sawiro xariiq bartamaha dhexe ee tallaalka qotodheer, si loo eego sifooyinka koritaanka ee cadaadiska.
(8) Ka dib marka tallaalka la dhammeeyo, ka soo saar giraanta tallaalka si aad u gubto afka tuubada oo ku xidh fur suuf ah.
(9) Jeermi giraanta tallaalka adigoo ku gubaya casaan.Hoos u dhig wareegga tallaalka oo adkee suufka.
2. Tallaalka dareeraha ah
(1) Dhexdhexaadiyaha la jeexjeexay wuxuu ku xiran yahay dhexdhexaadiyaha dareeraha ah.Habkan waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo sifooyinka koritaanka bakteeriyada iyo go'aaminta falcelinta biochemical.Habka qalliinku waa sidii hore, laakiin afka tuubada tijaabada ayaa u janjeedha kor si looga hortago in dareeraha dhaqanka ka soo baxo ka dib marka bakteeriyada la geliyo., xoq giraanta tallaalka iyo gidaarka gudaha ee tuubada dhawr jeer si aad bakteeriyada ugu dhaqdo giraanta hoose.Talaalka ka dib, fur furka suufka oo ku dhufo tuubada tijaabada si tartiib ah calaacalaha gacanta si aad si buuxda u kala firdhiso bakteeriyada.
(2) Ka tallaal dhexdhexaadiyaha dareeraha ah dhexdhexaadiyaha dareeraha ah.Marka cidhiidhigu dareere yahay, isticmaal pipette nadiif ah ama dhibic-dhibcaha wadajirka marka lagu daro wareegga tallaalka.Marka la tallaalayo, kaliya la soo bax suufka ololka agtiisa ah, sanka dhex mari ololka, ku nuugo dareeraha bakteeriyada gudaha xalka dhaqanka ee leh pipette nadiif ah, oo si fiican u rux.
3. Tallaalka saxanka
Bakteeriyada waa la xariijiray oo ku faafay taarikada.
(1) Ku-tallaalidda xad-dhaafka ah Eeg habka diilinta kala-soocidda.
(2) Dahaarka iyo tallaalka Ka dib markii la nuugo xalka bakteeriyada saxanka leh pipette nadiif ah, si siman ugu faafi dusha sare ee saxanka leh ul dhalo jeermis dilay.
4. Tallaalka dabada
Noocyada waxaa lagu tallaalaa dhexdhexaad qoto dheer oo adag.Habkan waxa loo isticmaalaa in lagu talaalayo bakteeriyada anaerobic ama in lagu eego sifooyinka jidheed marka la aqoonsanayo bakteeriyada.
(1) Habka qalliinku waa mid la mid ah kan kor ku xusan, laakiin irbadda tallaalka ee la isticmaalay waa inay noqotaa mid toosan.
(2) Ka dalooli irbadda tallaalka oo ka soo dus bartamaha dhexe ee dhaqanka ilaa ay u dhowdahay gunta hoose ee tuubada, laakiin ha dhex gelin, ka dibna si tartiib ah uga soo bixi habka daloolinta asalka ah.
Waqtiga boostada: Abriil-19-2022